Emva kwexesha elithile et akukho mntu ufuna ukwazi akukho namnye - Iphepha
Emva kwexesha elithile et akukho mntu ufuna ukwazi akukho namnye – Iphepha
Kodwa khangela synchronous kwi-incopho ukuba sisebenzisa kwi imeko apho kukho elandelayo obvious ukuba ingxaki transcends i-lm. Ukuba ufuna ungaceli kuba phambili, awunokwazi nkqu bazi ukuba uninzi hamba kakuhle okanye hayi. Ngoko ngokuqinisekileyo nawe uninzi cinga ukuba handsome towing ngaphandle stepping phambili, kodwa hayi wemiceli-ingxaki kule imeko, lm en ukwazi njani ukwenza obvious. Kodwa ke ukuba zithetha abafazi objectively efikelelekayo, yenza konke umahluko, kanjalo qiniseka kwaye uzame kwayo, ndicinga ukuba kubalulekile obvious. I yokuba xa omnye ezama kwaye umfazi isamkele yokhuseleko kwaye boosts mna-athathe, ewe, kwaye kanjalo ekhuselekileyo kuba emva mhlawumbi, ukuba inkunkuma kwaye succession ka thabatha izinto hayi beautiful ukuba kuza kukhokelela whining nezinye izinto, kodwa ubomi enye kuphela kwaye hayi yokucinga ngayo nje ukwenza nam ndonwabe, hayi ukuba ndifuna a imodeli (apho ke fashion, kwaye yonke into ngaloo-bume l ngayo sucks) kodwa kubekho inkqubela ukuba ndithanda kwaye apho kuwe wawa ngothando. Ukuba ndine ukuthatha omnye ukuba akunyanzelekanga ukuba appreciate kuphela ukubona ukuba bamele coupled kwaye athabathele wayecinga ke ndim yam obubobakhe, kwaye ndiya kuthabatha ababini spades ukususela okkt ukuze ndibe ngathi. Ukuba wathi, ndiza neyokusebenza ngokwam ukuphucula ngokwam angakudlakathisi ngokwasemzimbeni kwaye ndiza putting kunye kushishino projekthi wam owakhe ukwenza imali kuba personal satisfaction njengoko yam umsebenzi kuba ngenye tedious. Kanjalo, ndiza ukuqinisa wam trips kwi-Ebulgaria, ngoba ndifuna ukufumana kwabo elimnandi kakhulu ezahlukileyo ukususela stereotype yabasetyhini le mpuma.
Umfazi, nangona ke landslide kwi-seduction, phantse rhoqo a ngokuqinisekileyo esifutshane, kwaye kubalulekile babekholelwa, ngubani owaziyo, mhlawumbi abo. Xa umntu, kuba njengento engento, okanye mhlawumbi ezingachanekanga okanye awkward ukuba sinikela ngaphandle nkqu realizing ke, kusoloko kuyaphela phezulu ababini spades. Kwaye oku ngaphandle sizama mhlawumbi rhoqo ukuphucula ngokwethu. Olude omnye nemimangaliso ukuba ngenene kukunceda kakhulu, kwaye zonke entlakohlaza, ngenxa yokuba iinzame ngelize ngenye indlela. Ukuba abe cacisa: akunyanzelekanga ukuba isinye nabo bonke abafazi eh. Ukuza kuthi ga ngoku, kuba kuya kuvela kum le hypothesis, oko kuthetha ukuba mna andazi ilungelo ngenye indlela. Ndagqiba rhoqo zama, kuphela xa ndithanda, akukho ndifuna ukuba abe isiqulatho kunye (okanye ingaba ndifuna ukuba ibe imodeli eh), kodwa oko kwenzeka kakhulu kuyanqaphazekaarely ngenxa yokuba remix ka-imibandela ukuba andiyi fumana ngokwam phantse zange (phakathi aesthetics kwaye uphawu). Yinyaniso ukuba ndiza kuphuma abancinane, musa bakhanyela ngayo, ngoko ke ‘c’ ngu kanjalo inxalenye fault yam. Kwi end, ngcono ukuba devote ngokwabo ukuba efanayo s, kwaye jonga lo mba ukuba kamva, ukuze ingabi ukuba kunokwenzeka a mmangaliso-into kwesi sithuba.
Mna ndenza wam philosophy wobomi
Umfazi, ngokwe-avareji a engalunganga suitor. Kakhulu clumsy kwaye bakholelwa ukuba abe alluring, kwaye criticism i-indoda iindlela.
Sithande kwaye Sithande
oko ingaba Ebhalisiweyo iimpawu zokurhweba – Onke amalungelo agciniwe – nokuzala Kwalelwe, nkqu inxalenye. kuba izitatistiki ngeenjongo kuba ulawulo ngokunjalo acute-aplikeshini zabanye abantu cookies. Ngo siqhubeke khangela kule ndawo, babuyela ngendlela elandelayo, ngokunqakraza ikhonkco ngaphakathi okanye nangalo upelo, wena page imvume yabo sebenzisa
← Studio Kokubhala, Studio Kokubhala, Imbali, remix, hlela eyakho umculo